UNdunankulu uJoe Clark Biography
Xa wayeneminyaka engama-39, uJoe Clark waba nguNdunankulu omncinci waseCanada ngo-1979. U-Joe Clark kunye noorhulumente bakhe abancinci , bathatyathwa emva kokuphela kweenyanga ezilisithoba kwigunya lokungathembeki kwisabelo-mali sokunyuswa kweerhafu. cutshulwa kwenkqubo.
Emva kokulahlekelwa ukhetho lwama-1980, uJoe Clark wahlala kwiNkokeli yePhikiswano. Xa uBrian Mulroney ethatha iNkokeli yeQela leNgqungquthela yokuQonga laseCanada ngo-1983 waza ngoko uNdunankulu ngo-1984, uJoe Clark waqhubeka njengoMphathiswa wezoBudlelwane bangaphandle kunye noMphathiswa weMicimbi yoMgaqo-siseko.
UJoe Clark washiya ezopolitiko ngo-1993 ukuba asebenze njengomcebisi wezoshishino ngamazwe ngamazwe, kodwa wabuya njengoNkokheli weQela eliQhubekayo loLondolozo oluqhubekayo ukususela ngo-1998 ukuya ku-2003.
NgoJuni 5, 1939, e-High River, e-Alberta
BA - ISayensi yezopolitiko - iYunivesithi yase-Alberta
MA - ISayensi yezopolitiko - iYunivesithi yase-Alberta
UProfesa kunye nomcebisi wezoshishino ngamazwe ngamazwe
Izitambo (izithili zoNyulo)
Intaba yeRoyy 1972-79
ECalgary Centre 2000-04
Umsebenzi wezopolitiko kaJoe Clark
UJoe Clark waqala umsebenzi wakhe wezopolitiko njengoMlawuli weNtlangano ye-Alberta Progressive Conservative Party ukususela ngo-1966 ukuya ku-1967.
Wayengumcebisi okhethekileyo kwilungu lePalamende uDavie Fulton ngo-1967.
Wayekhonza njengomNcedisi oLawulayo ilungu lePhalamende uRobert Stanfield ukususela ngo-1967 ukuya ku-1970.
UJoe Clark wanyulwa kuqala kwiNdlu yeeManyeni ngowe-1972.
Wanyulwa njengeNkokheli yeQela leNgqungquthela yokuQonga laseKhanada ngowe-1976 kwaye yayiyiNkokeli yePhikiswano kwada kwa-1979.
UJoe Clark ufungelwe njengoNdunankulu waseCanada emva koonyulo olubanzi luka-1979.
Urhulumente we-Conservative wanqotshwa ngo-1980.
UJoe Clark waphinde waba yiNtloko ye-Opposition ukusuka ngo-1890 ukuya ku-1983.
UJoe Clark wabiza i-Progressive Conservative Party kwintlanganiso yesinkokeli kwaye waphulukana nobunkokheli beqela kuBrian Mulroney ngo-1983.
KuRhulumente waseMurroney, uJoe Clark wakhonza njengomPhathiswa weMicimbi yangaphandle ukusuka ngo-1984 ukuya ku-1991.
WayenguMongameli weBhunga eliPhezulu kunye noMphathiswa ojongene noMicimbi yoMgaqo-siseko ukususela ngo-1991 ukuya ku-1993.
UJoe Clark akazange asebenze ngonyulo jikelele luka-1993.
UJoe Clark wabuya njengeNkokeli yeQela leNgqungquthela yokuQonga eCanada ngo-1998.
Wakhethwa kwakhona kwiNdlu yeeManyeni ngo-2000.
Ngo-2002, uJoe Clark uthe wayephethe iQela eliQhubekayo loLondolozo lweMpilo ngokubanzi. Ukuyeka emsebenzini kaJoe Clark njengeNkqubela yeProgram Conservative Party yasebenza ngumbutho wenkokheli ngoMeyi 2003.
Akunakuvuyela ukuhlanganiswa okulandelayo kweQela eliQhubekayo loLondolozo kunye neQumrhu loMbutho kwi-Party entsha yeConservative yaseKhanada, uJoe Clark wanquma ukungaqhubi ukhetho oluqhelekileyo luka-2004.
Adrienne Clarkson Biography
Ukutyelela iRoyal ukuya eKhanada ye-Queen Elizabeth
Urhulumente waseCanada Federal
UNdunankulu uWilliam Lyon Mackenzie King
Umda Wokusela Okusemthethweni eCanada
Unyaka wezeMali weCanada
Ngubani uNellie McClung? Wenzani?
Imfazwe Yehlabathi I: I-American Ace Eddie Rickenbacker
Abaprofeti beBhayibhile abavela kwiTestamente eTestamente eNtsha
Iphi na nini i-US First Open Golf Tournament?
Iingcebiso zeProjekthi yeBantu
Izikolo ezizimeleyo zinikeza i-Diploma ye-Baccalaureate yamazwe ngamazwe
Ukwahlukana Phakathi kweBhakteria neeVirus
Iimpawu zeKrisimesi eziprinta
Ngaba Umthandi Wami Uya Kubuyela Kwam?
Kutheni iLogic ebalulekileyo?
Iimviwo zeeBakala zeBakala lesi-7
"Umntwana Ungumntu Wendoda"
Imibuzo yeBhililie Holiday
Abelard kunye neHloise: Ifa labaLandeli beMbali
Indlela yokukhetha iPhepha le-Pastel kunye neDraw Drawing
Pangram (i-Word Play)
Ergo 101 - Yintoni i-Ergonomics?
Imvelaphi yeSodiac yaseTshayina